New York Times oo sheegay in (CIA)ay ka war qabtay faragalinta Russia ee doorashooyinkii - Horn Future
WASHINGTON( AFP)-Waragayska ( New York Times) ayaa sheegay in waaxda sirdoonka Maraykanka ee (CIA)ay ka war qabtay in Russia ay faragaliso doorashooyinkii Maraykanka si uu u guulaysto Donald Trump,iyada oo ka wargelisay arrinta socota xubnaha Congress tan iyo xagaagii 2016.
Waxa kaliya oo Lagu dhawaaq faragalinta Russia ee doorashadii Maraykanka ka dib markii Trump uu guuleystay 8 bishii November,kolkaas oo sirdoonka Maraykanku si cad u cambaareeyey faragalinta Russia taas oo ka dambeeysay gunaanadkii baadhitaan uu amray madaxweynihii hore Barack Obama.
Wargayska “New York Times”,oo soo xiganaya masuuliyiin hore oo kamid ahaa maamulka Maraykanka ayaa sheegay inay dhaceen kulano qarsoodi ah si looga wargaliyo xubnahan ka mid ah Congress iyada sidoo kale la helay kala duwanaanshaha falanqaynta u dhexeeysay CIA iyo waaxda dambi baadhista Federaalka ee (FBI) ee arrintan la xidhiidha.
Mas’uuliyiin sar sare oo ka tirsan FBI-da ayaa u arkayay in ujeedada kaliya ee ka dambeeysay howlgallada budhcadnimada xogaha ee internet ka ee ay ku kaceen sirdoonka Russia ee lala beegsaday musharaxii Democrat ka Hillary Clinton,ay noqotay wareer ku dhacay geeddi-socodka doorashada, laakiinse aynan ahayn si loo taageero ninkan ganacsade ah. Si kastaba ha ahaatee, FBI da ayaa ka dib ka soo laabatay aragtidan oo gaadhay isla go’aanka CIA ay sheegtay.
John Brennan, madaxii hore ee CIA ayaa sheegay dhamaadka bishii August ,todobaad uun ka hor doorashada, inay ka wargeliyaan xubno ka mid ah Congress oo loo igmaday inay heleen xog qarsoodi ah waaxdiisu oo ahayd inay la socotay tilmaamo muujinaya suurto galnimada ah shirqoolo u dhexeeyay Trump iyo Russia.
Agaasimaha waaxda FBI James Comey ayaa bilowgii bishii Mars si rasmi ah daaha uga fayday intii lagu jiray kulanka guud ee Congress in waaxdiisu ay baadhayso arrintan.
Waxa sido kale guddiyada sirdoonka ee labada aqal ee Congress ay fureen baadhitaan la xidhiidha dacwadan,iyada oo Trump uu si adag u cambaareeyay eedeymaha shirqoolada ah oo aanan wali loo soo bandhigin caddaymahooga dadweynaha.
« Indian intelligence seeks fresh charges in mosque case	» Madaxweyne Park oo xabsiga u seexatay sababo musuqmaasaq iyo dilaaga Geelle iyo qoyskiisa oo noqday mafia xukunta dal